Faarax Macalin oo Kenya u eedeeyey inay laba u jeedo ka leedahay Somalia – Radio Baidoa
Faarax Macalin oo Kenya u eedeeyey inay laba u jeedo ka leedahay Somalia
By Webmaster	 On Feb 6, 2020
Faarax Macalin oo mar soo noqdey Guddoomiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ay amaanka dalkooda Gudaha Soomaaliya ka ilaalinayaan,balse aysan jirin wax kale oo ay soo kordhinayaan.
Qoraal uu soo dhigey Barta uu ku leeyahay twitter-ka ayaa waxaa uu ku baaqay in gebi ahaan Ciidamada Kenya laga saaro dalka Soomaaliya,ayna gudaha dalkooda ku ilaashadaan Macalimiinta iyo Ardayda ay mar walba Al-Shabaab weerarada ku dilaan.
Waxaa uu soo hadal qaadey falal amnidarro ee ka dhaca Gudaha Kenya waxaana uu sheegay in markii Ciidamada Kenya Soomaaliya soo galeen sanadkii 2011 ay hadda kenya ka amni xun tahay.
“Ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya amaanka dalkooda ayay halkaan ka ilaaliyaan,sidoo kale waxaa ay halkaan u joogaan inay si sharci darro ah uga Ganacsadaan Dhuxusha iyo Sokorta ayuu yiri” Faarax Macalin.
Hadalkaan kasoo yeeray Siyaasiga Faarax Macalin oo mar soo noqdey Guddoomiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli shalay qoraal kasoo baxay Dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey dowladda Kenya inay faragelin Siyaasadeed ka wado Gudaha dalka Soomaaliya.
Maamulka Gobolka Gedo oo ka shirey Ciidamada la geeyey
Mahdi Guuleed”Qorshaha xal u helida Barakacayaasha waa muhiim